Cartel Weyn: Ganacsiga loogu talagalay Fanaaniinta | Martech Zone
Cartel Weyn: Ganacsi loogu talagalay Fannaaniinta
Axad, Janaayo 26, 2014 Axad, Janaayo 26, 2014 Douglas Karr
Waxaa la aasaasay 2005 si ay uga caawiyaan aasaasayaashooda iibinta badeecada kooxdiisa, Cartel Weyn ayaa hadda hoy u ah in ka badan 400,000 oo farshaxanno madax-bannaan oo adduunka ah. Mashruucooda ecommerce waxaa si gaar ah loogu dhisay inay ka caawiyaan hal-abuurka wax soo saarkooda internetka. Waa kuwan fiidiyow mid ka mid ah macaamiishooda, Noolaha Ha Noolaado, Naqshadeeye dharka.
Cartel Weyn waxay bixisaa waxtarrada iyo astaamaha soo socda:
Muddejin deg deg ah - Dukaan fudud ka hel khadka tooska ah daqiiqado gudahood.
Easy in ay isticmaalaan - waxay bixiyaan barxad fudud oo si fudud loo isticmaali karo.
Ganacsi maskaxeed - warbixinta iyo maaraynta nidaamka.
Branded - Fududeyn ku habboon u-habeyn sarreysa oo aan lahayn lambar sireed loo baahan yahay. Isticmaalayaasha ayaa dooran kara mawduucyada horay loo sameeyay oo si fudud u habeyn kara sawirrada, midabada, iyo noocyada.
Xarumaha gaarka loo leeyahay - Adeegso cinwaan kasta oo aad leedahay si aad u siiso bakhaarkaaga URL khaas ah.
Maamul amarkas - aag maareyn amar ah iyo amarro emayl xaqiijin ah oo aad adigu habeyn karto.
Mashiinka raadinta ayaa la hagaajiyay - dukaamada ayaa lagu hagaajiyay makiinadaha raadinta, iyada oo ku saleysan talooyinka Google.
Xogta iyo falanqaynta - la soco dhaqdhaqaaqa dukaanka iyo koritaanka iyadoo la adeegsanayo waqtiga dhabta ah stats-ka iyo is-dhexgalka Google Analytics.
Xeerarka qiimo dhimista - Xeerarka qiimo dhimista waxay bixiyaan siyaabo kala duwan oo suuq loogu sameeyo alaabada cusub, kor loogu qaado bakhaarkaaga, loona abaalmariyo macaamiisha daacadda ah.
Waxyaabaha digital ah - ku iibiso farshaxanka dhijitaalka ah, muusigga, fiidiyowyada, astaamaha, sawirrada, eBuugaagta, iyo badeecadaha kale ee la soo dejisan karo iyada oo lala kaashanayo adeegga walaasheen isku dhafan Pulley.
Ku iibi Facebook - Ku dar bakhaarkaaga bog kasta oo Facebook ah oo ku xir taageerayaashaada alaabadaada adoo adeegsanaya barnaamijkeena Facebook ee isku-dhafka ah.
Iibsiga moobiilka - si toos ah uga iibso alaabtaada iPhone-kaaga App Cartel weyn.
Tags: kartoon weyndukaan dijitaal ahecommerceecommerce farshaxankamindiiibso farshaxanka internetkaiibiso moodada internetka
5 Go'aannada Suuqgeynta ee Internetka ee 2014